Basaska İZTA BIT waxay qaateen 113 kun oo rakaab ah labadii toddobaad ee ugu horreeyay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirBasaska İZTAŞIT waxay qaateen 113 kun oo rakaab ah labada usbuuc ee ugu horeeya
17 / 01 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
basaska iztasit labada toddobaad ee ugu horreeya ee rakaabka
Basaska İZTAŞIT waxay qaadeen 113 rakaab ah qadka Seferihisar, halkaas oo dalabka laga bilaabay labadii usbuuc ee ugu horreeyay. Dhowr horumar ayaa la sameeyay si loo wanaajiyo tayada safarka.
Waa labo toddobaad gadaasha mashruuca 'ŞZTAŞIT' oo ay billowday degmada İzmir ee Magaalo Weyn si loogu daro iskaashatooyinka gaadiid ee degmooyinka ku hareereysan shabakadda gaadiidka dadweynaha. Gawaarida İZTAŞIT, oo bilaabay inay siiyaan adeeg tayo sare leh basas cusub, ayaa wata 113 kun oo rakaab ah labada toddobaad ee ugu horreeya, halka carqaladeynta loo arkay nidaamka cusub awgeed si dhaqso leh loo xallinayo. Si kor loogu qaado tayada duullimaadyada "ŞZTAŞIT", oo had iyo jeer ay kormeeraan shirkadda ESHOT, xalalka lagu abuuray iftiinka indha indheynta iyo sidoo kale ogeysiinta ka socota maamulka iskaashiga iyo muwaadiniinta ayaa si dhaqso leh loo dhaqan gelinayaa.
Codsiga "ZTATAIT" wuxuu isku darayey darawalada iyo basaskooda Seferihisar hal saqaf.
Saddex bas oo dheeri ah ayaa imaan doona
Isagoo cadeeyay in carqaladeynta barnaamijka safarka lagu yareyn doono seddex gaari oo cusub oo lagu soo dari doono 'ZTAŞIT' waqti kooban, Maamulaha Guud ee ESHOT Erhan Bey ayaa yidhi, "Waxaan si dhaqso ah uheleynaa xalka dhibaatooyinka sida adeega oo yaraanta iyo is dhexgalka khadadka. Cillad-darrooyinka dhismaha ayaa laga helay Ulamis. Kuwaas si dhakhso leh ayaa loo rakibi doonaa. Illaa iyo hada ma hayno dariiq weyn. Xubnaha iskaashatadu sidoo kale si dhakhso leh ayey ula qabsanayaan. Way ka warqabaan qaab dhismeedkooda waxayna u korayaan si ku habboon. Nidaamku waa mid aad u cusub oo fadhiya. Muddo kadib wax walba way fiicnaan doonaan.
Waxay ku faafi doontaa dhammaan degmooyinka
Waxaa loogu talagalay in 'ŞZTAŞITs ay ka shaqeyn doonaan guud ahaan Jasiiradda mustaqbalka dhow ka dibna dhammaan degmooyinka ku hareereysan ee İzmir. Sidaas awgeeda, Agaasinka Guud ee ESHOT wuxuu sii wadaa wadahadalada uu la galo maaraynta shaqsiyaadka iskaashatooyinka gaadiidka ee ka shaqeeya degmooyinka.
Horumar laga sameeyo İZTAŞIT
Sababtoo ah xoojinta Seferihisar - İzmir safka lambarrada ah ee tirsigiisu yahay 975 iyo 985, tirada safarada ayaa kordhay min 11 daqiiqo illaa 8 daqiiqadood iyadoo la kordhinayo tirada baabuurta.
Wada noolaanshaha waqtiga safarka ee 991 lambar Çamtepe - Basaska Seferihisar oo leh saacadaha iskuulka ee ardayda deggan Gödence, Gölcük iyo Çamtepe ayaa la xaliyay iyadoo la kordhinayo waqtiga fiidkii. Waqti luminta awgeed basas la mid ah oo u adeega gobollada Almonds, Ihsaniye iyo Turgut ayaa laga adkaaday markii Bademler No 732 - Urla line uu ka dhigay Bademler istaaggii ugu dambeeyay. Ihsaniye iyo Turgut waxay bilaabeen in loogu adeego khadka 991.
Lambarka 990 Beyler - Seferihisar Line waxaa loo fidiyay hal adeeg subaxnimo iyo laba adeeg.
Waxaa la go'aamiyay in la sameeyo joogsigii ugu dambeeyay ee Ürkmez, halkii laga istaagi lahaa meeshii ugu dambeysay ee No. 829 Cumaovası - Seferihisar Line ee Orhanlı. Markaa, is-dhex-galka khadadka 829 iyo 989 ayaa la gaadhay.
Waqtiga luminta iyo soo noqnoqoshada safarada oo ay ugu wacan tahay tirada 989 ee Orhanl numbered - Seferihisar ee u adeegta Magaalada Ömür Town iyo Payamlı ayaa la xallin doonaa imaatinka seddex gaari oo cusub oo lagu daro doonyaha.
Milkiileyaasha 40% iyo wixii ka weyn ee warbixinta naafada ah, kuwaas oo xaq u leh raacitaanka basaska ESHOT, saaxiib la ah naafada iyo muwaadiniinta ka weyn 65; Izmir Metropolitan Municipal Seferihisar Maareeyaha Adeegga Maxalliga ah iyo waaxda Adeegga Macaamiisha ESHOT ee Konak waxay sidoo kale heli karaan fuulo bilaash ah İZTAŞITs oo leh sawir Izmirim Card.
113 kun oo 25 kun oo rakaab ah oo ka weyn 65 sano jir
Gawaarida 'ŞZTAŞIT, oo soo dhameystay muddadii ay qaadan lahaayeen lacagta kaashka ah iyo rakaabka wadada dhinaceeda ku jira gaadiidka dadweynaha, oo ay saaran yihiin kaliya İzmirim Card iyo ka shaqeeya hoos imaadka ESHOT, ayaa qaaday 113 kun 413 rakaab labadii toddobaad ee ugu horreeyay. In kasta oo tirada guud ee rakaabka la raaco, ardayda, macallimiinta iyo 60-ka rakaab ah ay ahaayeen 88 kun 70; Wadarta dadka naafada ah, da'da 65 sano iyo kaararka kale ee bilaashka ah ee laga helo ESHOT Agaasimaha Guud waxay ahayd 25.
120 Thousand Rakaabka Gaadiidka Seabus ee Antalya
3. Saldhigga buundada ayaa la qaadayaa maanta laakiin mashruuca 113 sanadkiiba (Video)
Basaska degmada ee gobolka Batman waxay celcelis ahaan dadka 652 kun 830 ku qaadaan bishiiba
Gaadiidka Gaadiidka Gaadiidka Lagu Kordhiyo ilaa Kocaeli Dad Badan
Barashada Ski Isbuucaan
Jadwalka khidmadda İZTAŞIT